Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Hoyoyinka Ogadenya oo Siwanagsan Uga Qabsomay Minnesota
Shirkii Hoyoyinka Ogadenya oo Siwanagsan Uga Qabsomay Minnesota
Sabti, 30 May 14, Waxaa manta magalada Minneapolis ka qabsomay shirkii Hooyoyinka Somalida Ogadenya ee gobolka Minnesota. Shirkan ayaa ahaa mid si aad ah loo soo agasimay oo ay si baldhan uga soo qayb galeen hoyoyinka Somalida Ogadenya.
Waxaa shirkan marti sharaf ka ahayd abwanada qaranka Somalida Ogadenya Rooda Ibrahim Cabdi Guray (Rooda Afjano). Walow ay Rooda khudbado dhiga dhaqajiayay ay soo jedisay balse, Sidii lagu yaqanay Roodo, Waxay soo ban dhigtay gabayo iyo sugan qiira leh oo aad qiiro ugu dhaliyay dadwaynihii ka soo qayb galay shirka.
Sugunta ay Abwanad Rooda soo bandhigatay oo ad u mugwaynaa xigmad baladhana xanbarsana ayaa waxay shucuur goni ah ku aburtay dadka waxa curiya waxayna sababtay inay dadbadani soo bandhigaan suugan dhiiga dhaqajinaysa oo aan kala go,lahayn.
Abwanad Rooda ayaa mudadii ay Qaradani W/America joogtay waxaa waday howla ababul oo ku wajahan bulshada afka Somaliga Ku hadasha. Waxay shirar khadka talefoonka ah kaga qayb gashay gobaha baltoka oo ay isugu yimadan Somalidu kuna kala faiidaystan. Waxa kale oo ay Rooda socdaalo ababul kukala bixinaysaa gobolo badan oo ka mid ah wadankani Maraykanak.
Isku soo xoriyoo, Shirkii Hooyoyinka Somalida Ogadenya ee ka qabsoomay gobolka Minnesotaa ayaa ahaa mid cajaib ah qiiro iyo shucur badana ku dhaliayay dadka jecel wanaga iyo xornimada shacabka Somalida Ogadenya. Shirkuna wuxuu ku soo dhamaday guul iyo raynrayn.